Nezvedu - Goldenor Electronic Technology Co., Ltd.
Tifonere +86 13425051878
4U chassis chassis
2U maindasitiri chassis
Imba > Nezvedu
GoldenorElectronic Technology Co, Ltd. inosanganisa R&D, kugadzirwa uye kutengesa, kuita dhizaini uye kugadzira rackmount chassis, server chassis, andindustrial chassis. Iyo kambani yakavambwa musi wa9 / 17 muna2014. Muna 2015, yakagadzira zvigadzirwa zvayo zvakajairika. Muna 2016, yakawana kutumirwa pamwedzi pamakumi mashanu emayuniti ezvigadzirwa zvakajairwa uye zvikamu zve30,000 mu2019. Iyo kambani hasprecision jira simbi yekugadzirisaï¼ˆNCTï¼ ‰, molddesign uye kugadzira, uye kutsika. Kugadzira, kupenda uye kugona kugona. Panguva imwecheteyo, kambani inotora zvinodiwa nevatengi sezvo iyo coreand yakaunganidza boka rematarenda akanakisa mumunda wehunyanzvi hunyanzvi, uye inovavarira kupa vatengi chiye-chinogadziriswa overallsolution kubva mukugadzirwa kwehunyanzvi kuenda mukugadzira nhasi kana zvigadzirwa zvanyatso homogenized.
"Inokasira, yakanyanyisa, uye ine hunyanzvi" ibhizimusi raGororor, "kuvhura, kugadzira, uye kugovana" huzivi hwehutungamiriri hwaGoldenor. Chiono chedu ndechekufunga kwepasirese uye hunyanzvi hwemhando dhizaini dhizaini uye kugadzira nyanzvi, "mutengi-centric" Kugadzira iyo inokosha inozivikanwa nevatengi, kuisa vanhu pamberi, kurega varwi vachigovana hupfumi hwemakambani "ndiko kukosha kwedu kukuru." Kugadzira kukosha kwevatengi "ndiko kuramba uchiita. yenhengo dzese dzeGorororor.Tichaenderera mberi kuzvipfuura isu uye nekupa vatengi zvigadzirwa zvakanaka uye masevhisi!
Productapplication scope: kuchengetedza chassis, cloud computing server, cloud storageserver, maindasitiri chassis, vhidhiyo yekuongorora System, simba system chassis, GPU server, kumucheto komputa.
Server zero yekudyara mhinduro2021/01/18
Nhanganyaya: Kuziva kuchengetedza data hakureve kuti inoda mari yekudyara. Kana kukosha kwedata kusiri kwepamusoro, sisitimu iri nyore, uye hapana chikonzero chekushandisa uye kuchengetedza kwenguva refu, zvinokwanisika kushandisa zviwanikwa zviripo kuvaka dhata rekuchengetedza dhata pasina chero ca......
Chirevo chekutsvagisa chinoti China yepamhepo server indasitiri cheni iri kusimbiswa zvishoma nezvishoma2021/01/18
Sangano rekutsvagisa riri pasi peMinistry yeIndustry uye Information Technology yeChina rakaburitsa chena pepa musi wechitatu. Yakaratidza kuti nerutsigiro rweyakavhurika OpenPOWER tekinoroji, zvishoma nezvishoma yakagadzira kushomeka kweakakosha matekinoroji emaseva epamba. Iyo epamba server indasi......
Nei sevha ichifanira kuiswa mukamuri yemakomputa?2021/01/18
Kunyangwe iyo webhusaiti inogona kukura zvine hutano kana kwete, zvinonyanya kukosha kusarudza yakakodzera server nzvimbo, iri zvakare iri yakajairika musoro mune indasitiri. Heino rondedzero ipfupi yezvinhu zvinoda kutariswa pakusarudza sevha, kuitira kuti ma novices azvizive nekukurumidza sezvazvi......
Iko iriko kona yakafa yeserver chassis yekugadzirisa2021/01/18
Iyo sevha chassis mhando yeyakaenzana "unokosha" michina nemidziyo. Kazhinji, inofanirwa kugara iine guruva uye ichichengetwa kuitira kuti muchina ugone kushanda nemazvo. Muchokwadi, isu tinowanzo tarisa dzimwe nzvimbo panguva yekugadzirisa, saka ndedzipi dzakafa magumo ekuchengetedza kwedu? Tarisa ......
Tumira Kubvunza: Zvekubvunza nezve zvigadzirwa zvedu kana pricelist, ndapota siya email yako kwatiri uye isu tichava nekuonana mukati maawa makumi maviri nemana.
@Copyright 2020-2021 Goldenor Magetsi Technology Co, Ltd.éš ç§